Banaanbax shalay ka dhacay xarunta Midowga Yurub ee Brussels
Halkan ka daawosawirada bannaanbaxa
Dec 30, 2008: Jaaliyadaha Soomaalida Ogaadeenya ee qaarada Yurub ayaa si wada jir ah u qabtay Banaanbax weeyn si heer sare ahna loo soo agaasimay shalay oo aay taariikhdu ahayd 28ka bishan Maarso ee sanadkan 2008. Dibad baxan ayaa ka dhacay ka soo horjeedka xarunta Midowga Yurub ee Brusselles iyadoo halkaasi fadhi u tahay heeyadaha ugu sareeya maamulka wadamada ku bahoobay midowgan. Ujeedada banaanbaxan ayaa ahayd sidii indhaha caalamka guud ahaan gaar ahaana midawga Yurub loogu soo jeedin lahaa dhibaatada xad dhaafka ah oo uu gumeysiga itoobiya ku hayo shacbiga aan waxba galabsan ee Soomaalida Ogaadeenya.
Tirada banaanbaxayaasha ayaa ku dhaweyd sadex boqol oo qof oo isugu jira haween, caruur, dhalinyaro iyo dad da’ah oo qaarkood soo galay safaro dhaadheer oo xaga dhulka ah kana kala yimid wadamada: UK, Finland ; Germany, Holland, Sweden, Norway, Denmark, Italy iyo Switzerland.
Inta uu banaanbaxani socday ayey xubnaha jaaliyadaha Ogaadeenya ee Yurub ku qeeylinayeen erayo ka dhan ah gumeeysiga itoobiya iyagoo is la markaana muujinayay garab istaagida shacbiga dulman iyo taageerada eey u hayaan halganka xalaasha oo aay umada Ogaadeenya ugu jirto sidii eey uga hoos bixi lahayd gacanta gumeeysiga madoow.
Waxeynu halkan u joognaa maanta in aan ku dhiiri galino masuuliyiinta Midowga Yurub sidii aay wax uga qaban lahaayeen xad gudubyada badheedhka ah oo uu ku kacayo taliska gumeeysiga itoobiya is la markaana u guntadaan ka samata bixinta umada dulman ee Ogaadeenya waxyeeleeynta kale taliskani la damacsan yahay shacabka Ogaadeenya, ayuu yiri oday da’diisu kor udhaaftay 80 jir oo ka mid ahaa banaanbaxaya. Isagoo hadalkiisa raaciyay in maanta umada Soomaalida Ogaadeanya gudaha iyo dibadada u guntadeen sidii eey u heli lahaayeen xuquuqdooda aas-aasiga ah oo aay ugu horeeysa xaqa aayo ka talinta.
Waxaa xusid mudan in taliska arxanka daran ee itoobiya, ka sokoow dilka, dhaca iyo kufsiga uu la soo baxay cadowtinimo aan ayadoo kale la’arag oo aay cuno qabateeyntu ka mid tahay. Intii lagu guda jiray dibad baxan ayeey ka soo qeeyb galayaashu qeeybinayeen qoraalo ku xusan yihiin dhibaatooyinka kala duwan oo aay ciidamada cadowga u geeystaan muwaadhiniinta Ogaadeenya.
Xubnaha jaaliyadaha Ogaadeenya ee Yurub ayaa wacad ku maray in eey dhiciseeyaan qorshayaasha cadawga ka wado Ogaadeenya iyagoo u guntaday sidii qadiyada Ogaadeenya ugu dhigi lahaayeen mid dunidu wax ka qabadkeeda u soo jeesato, is la markaana muujiyay muujin doonana in xasuuqa shacabku uusan ahaaneeyn mid aanay xisaab ka danbeeyn. Shaleeyto iyo fashilna uu ku danbeeyn doono taliska gumeeysiga itoobiya iyo u adeegayaashiisa.
Ugu danbeeyntii masuul ka socday Midowga Yurub ayaa la gudoon siiyay qoraaladii cabashooyinka rasmiga ahaa isagoo u gidbin doona masuulka lagu magacaabo Mr.Louis Michel oo midowga Yurub u qaabilsan iskaashiga iyo gargaarka. Waxaa xisid mudan in isla qoraaladan goor hore loo gudbiyay ninka ugu sareeya midowgan. Dalabyadii laga dalbanay bulshada caalamka ayaa waxaa ka mid ahaa :
In midawga Yurub hadh cad canbaareeyaan dhaqan xumada dowlad ku sheegta itoobiya.
In dowlad ku sheegta itoobiya cadaadis lagu saaro in eey shuruud la’aan qaado xayiraada ula kaca ah oo aay ku soo rogtay shacbiga Ogaadeenya.
In midawga Yurub u diraan Ogaadeenya ciidamo nabad ilaalineed oo shacabka ka difaaca waxashnimada gumeeysiga itoobiya.
In midawga Yurub dirto gudigii xaqiiqo raadinta ahaa oo eey kal hora ku baaqeen wufuudii QM ka socotay ee booqotay Ogaadeenya dhamaadkii sanadkii tagay.
Iyo ugu danbeeyntii in midawga Yurub ku kaalmeeyaan umada Ogaadeenya in badaxbanaanidooda helaan taas oo waafaqsan qawaaniinta caalamiga ah iyo dastuur ku sheega itoobiya.
Email : communauteogaden@net2000.ch